तपाइको सास गन्हाएर हैरान हुनुन्छ? यस्ता छन् घरेलु उपचारहरू - Nawalpur Dainik
April 14, 2021 by Nawalpur Dainik
काठमाडौँ । कसैले तपाइसँग बोलिरहेको बेला मुन्टो बटार्छ भने सम्झनुहोस् तपाइको श्वास गनाइरहेको पनि हुन् सक्छ । श्वास गनाउने समस्या बाट धेरै जना दिक्क परिरहेका हुन्छन् । अरूसँग हाँस्दा बोल्दा नै सास गनाउन थाल्यो भने कोही पनि नजिक हुन चाहँदैनन् । हाम्रो सास गन्हाउनु भनेको नै अस्वस्थताको सङ्केत हो । आफ्नो सास गन्हाएको थाहा नपाउने पनि धेरै हुन्छन् । कसरी समाधान गर्ने त जान्नुहोस् घरेलु उपचारहरू
सुत्नुभन्दा अगाडि दाँत माझ्ने : यदि तपाइले दाँतको सरसफाइमा उचित ध्यान दिनुभयो भने, सास गनाउने समस्या र विभिन्न किसिमका दन्तरोगहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ । बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठेपछि दाँत माझ्नाले सास गनाउने समस्या कम हुँदै जान्छ । ल्वाङ सेवन : यदि तपाइको सास गन्हाइ रहन्छ भने बेला बेला मुखमा ल्वाङ राख्ने बानी गर्नुहोस । यसले सासमा ताजापन ल्याउँछ । नुनपानी : मनतातो पानीमा नुन हालेर दिनमा दुई पटक कुल्ला गर्नुहोस । यसले जिब्रो सफा हुनुका साथै जिब्रोमा जम्मा भएका ब्याक्टेरियाबाट टाढा राख्दछ ।
सुत्नुभन्दा अगाडि पानी पिउनुहोस : राति सुत्दा शरीरमा पानीको कमी भयो भने पनि सास गन्हाउने समस्या देखापर्दछ । त्यसैले दैनिक कम्तीमा पनि ४ लिटर पानी पिउनुहोस । जसले गर्दा सास गन्हाउने समस्यामा कमि आउँछ । ताजा खनेकुरा खाने : ताजा र प्रशस्त पानी पाइने फलफूल, जस्तै गाँजर, काँक्रो, स्याउ, आदि दैनिक खानुभयो भने पनि सास गनाउने समस्यामा कमी आउँछ । पुदिना पानीले कुल्ला : पिसेको पुदिनालाई पानीमा घोली दैनिक कम्तिमा तिन पटकसम्म कुल्ला गर्नुहोस । यसले सासलाई ताजा राख्दछ ।
गुलियो खानेकुरा कम खानुहोस : गुलियो खानेकुराहरू खाइसकेपछि मुखमा केहि कणहरू बाँकी हुन्छन । जसप्रति ब्याक्टेरिया पनि छिट्टै नै आकर्षित हुने गर्दछन र ती ब्याक्टेरियाहरू एसिडमा परिणत भई सास गनाउने जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखा पर्दछन । नरिवलको तेल : बिहान दाँत माझ्नु अघि नरिवलको तेलले मुख कुल्ला गर्नुहोस । त्यसपछि मनतातो पानीले कुल्ला गर्नुहोस । जसले सास गनाउने समस्या कम गर्दछ । घ्यूकुमारीको रस : घ्यूकुमारीको रसमा जिब्रो र मुखमा रहेका ब्याक्टेरिया हटाउने गुण हुन्छ । एकहप्ता सम्म घ्यकुमरीको जुसले मुख कुल्ला गर्नाले सास गनाउने समस्याबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ ।
Prevरङ्गशाला विवादमा आयो तारा बराललाई यस्तो ध’म्की कसले दियो होला ? सब तना’बमा (भिडियो सहित)
Nextयी हुन् साउथ फिल्मका महँगा ६ अभिनेत्री, कसको पारिश्रमिक कति ?